लापरवाह युवकदेखि राष्ट्रपितासम्म ! – Kadar News : Oneline Digital News:
लापरवाह युवकदेखि राष्ट्रपितासम्म !
प्रकासित : १६ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:२७
१६ असोज, काठमाण्डौ । भारतमा राष्ट्रपिताको उपमा पाएका मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई महात्मा भनिन्छ । उनी एक चतुर नेता थिए, जसले बेलायतीहरुको शासन बाट भारतलाई स्वतन्त्र गराए, गरिब भारतीयहरुको हक–अधिकारका लागि आवाज उठाए । उनले सिकाएको अहिंसात्मक विरोधको शैली आज पनि संसारले सम्मानका साथ सम्झन्छ ।
बम्बईको भावनगर कलेजमा पढ्दै गर्दा उनलाई लण्डनको चर्चित इनर टेम्पलमा कानून पढ्ने अवसर जु¥यो । यस प्रस्तावप्रति परिवार सकारात्मक थिएन, अग्रजहरुले विदेश पढ्न जाँदा जात घटुवा हुन्छ भनेर चेतावनी दिएका थिए । तर, गान्धी पछि
हटेनन् । लण्डनमा मोहनदास गान्धी पुरै पश्चिमी ठाँटमा रंगिए । यसका बाबजुद, यस समय चलेको शाकाहारी आन्दोलनमा उनी जोडिएका थिए । लण्डनको थियोसोफिकल सोसाइटीको अध्ययनले उनलाई आफ्नो बाल्यकालका हिन्दु मान्यताहरुसँग फेरि जोड्यो ।
जब एक पत्रिकाले गान्धीमाथि पाखण्डीको आरोप लगाएको थियो । तर उनले भनेका थिए, ‘म भारतको स्वदेशी कपडा लगाउँछु किनकी भारतीय हुनुको सबैभन्दा सरल र प्राकृतिक उपाय यही हो ।
जेलमै कस्तूरबाको निधन भयो, यसको धेरै महिनापछि सन् १९४४ मा गान्धी रिहा भए । भारत छोडो आन्दोलनअघि गान्धीले भनेका थिए, ‘या हामीले भारतलाई स्वतन्त्र गराउनुपर्छ या यो प्रयासका लागि बलिदानी दिनुपर्छ । तर कुनै पनि मुल्यमा आजीवन दासत्वको जीवन जिउनका लागि हामी राजी छैनौँ ।
देश विभाजनका कारण निम्तिएको हिंसाले गान्धी चिन्तित थिए । पाकिस्तान नगएर भारतमै बस्ने निर्णय लिएका दिल्लीका मुसलमानहरुको अधिकार रक्षा गर्ने प्रयासका लागि उनी कोलकत्ताबाट फर्किए । उनले यी मुसलमानहरुको हकका लागि अनशन सुरु गरे । यस दौरान जब एकदिन उनी दिल्लीको बिन्डला हाउसमा एक प्रार्थनासभामा जाँदै थिए, त्यति नै बेला हिन्दु अतिवादी नथुराम गोड्सेले हमला गरे, गान्धीको छातिमा तीन गोली लागेको थियो । हिन्दू अतिवादीहरुले गान्धीको मृत्युको खुसी पनि मनाए । तर, अधिकांश भारतीयहरुका लागि महात्मा गान्धीको मृत्यु राष्ट्रिय शोक थियो । दिल्लीमा महात्मा गान्धीको अन्तिम यात्रामा दश लाखभन्दा धेरै सहभागी थिए । यमुना किनारमा उनको अन्तिम संस्कार गरियो । संसारभरका मानिसले अहिंसा र शान्तिका यी पुजारीको मृत्युमा शोक मनाए । आफ्नो मृत्युबारे गान्धी स्वयंम्ले भनेका थिए, ‘मृत्युबीच जिन्दगीले आफ्नो संघर्ष जारी राख्छ । असत्यबीच सत्य पनि अटल खडा हुन्छ । अन्धकारबीच प्रकाश चम्किरहन्छ ।